အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ ၀တ်ပြုနေတဲ့ ဗလီအတွင်းကို တောဝက်တကောင် ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဝတ်ပြုနေသူတွေ ထွက်ပြေးခဲ့ရ – WunYan
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ ၀တ်ပြုနေတဲ့ ဗလီအတွင်းကို တောဝက်တကောင် ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဝတ်ပြုနေသူတွေ ထွက်ပြေးခဲ့ရ
whuk-46651 | March 7, 2018 | International News | No Comments
မလေးရှားနိုင်ငံ စီလန်ကာပြည်နယ် ဆန်းဂိုင်း ဘူလော့ခရိုင်အတွင်းရှိ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ ၀တ်ပြုနေတဲ့ ဗလီအတွင်းကို တောဝက်တကောင် ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဝတ်ပြုနေသူတွေ ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့ မလေးနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ သတင်းတွေမှာ ဖေါ်ပြနေပါတယ်။
၀က်ဟာ မိနှစ်သုံးဆယ်ကြာ ဗီလီအတွင်းမှာ သောင်းကျန်းနေခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးမှာ ၀က်ကိုသေနတ်နဲ့ပစ်သတ်ခဲ့တယ်လို့ လည်းသိရပါတယ်။ ကုန်ပြီး ၀တ်ပြုနေသူ အမျိုးသားတဦးကတေ့ဝက်ပက်ခံလို ဒဏ်ရာရသွားတဲ့ အကြောင်း သိရပါတယ်။ (SAW)
KUALA LUMPUR: A man was injured whenawild boar attacked him insideamosque in Sungai Buloh last night. The man was getting ready to perform the Isyak prayer when the animal charged at him.
Source : Strait time
အစ်စလာမျဘာသာဝငျမြား ဝတျပွုနတေဲ့ ဗလီအတှငျးကို တောဝကျတကောငျ ဝငျရောကျတိုကျခိုကျခဲ့လို့ဝတျပွုနသေူတှေ ထှကျပွေးခဲ့ရ
မလေးရှားနိုငျငံ စီလနျကာပွညျနယျ ဆနျးဂိုငျး ဘူလော့ခရိုငျအတှငျးရှိ အစ်စလာမျဘာသာဝငျမြား ဝတျပွုနတေဲ့ ဗလီအတှငျးကို တောဝကျတကောငျ ဝငျရောကျတိုကျခိုကျခဲ့လို့ဝတျပွုနသေူတှေ ထှကျပွေးခဲ့ရတယျလို့ မလေးနိုငျငံ ဆိုငျရာ သတငျးတှမှော ဖျေါပွနပေါတယျ။
ဝကျဟာ မိနှဈသုံးဆယျကွာ ဗီလီအတှငျးမှာ သောငျးကနျြးနခေဲ့ပွီး နောကျဆုံးမှာ ဝကျကိုသနေတျနဲ့ပဈသတျခဲ့တယျလို့ လညျးသိရပါတယျ။ ကုနျပွီး ဝတျပွုနသေူ အမြိုးသားတဦးကတဝေ့ကျပကျခံလို ဒဏျရာရသှားတဲ့ အကွောငျး သိရပါတယျ။ (SAW)
ကမ္ဘာပေါ်က အကြီးဆုံး ကြာပင်
သူငယ်ချင်း ယောက်ျားလေး ခေါ်ရာကို ယုံကြည်ပြီး လိုက်သွားမိတဲ့ ထိုင်းမိန်းကလေးရဲ့ အဖြစ်
ကုန်တင် လေယာဉ် တစ်စင်းပေါ်မှ ရွှေထုတ်များ ပြုတ်ကျ
တစ်နေ့ထဲ ပြိုင်တူ သေဆုံးသွားခဲ့ကြတဲ့ အသက် ၆၈ နှစ် အဖိုးနဲ့အသက် ၆၅ နှစ် အဖွား
ပေါင်းအိုးအတွင်း အချိန်ကြာဆုံး ၀င်ရောက်နေပြခဲ့သည့် ဘိုးတော် ရေနွေးပူလောင်သေဆုံး
© 2018 WunYan.